Hose Bibcock - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Hose Bibcock ထုတ်ကုန်များ)
ကြေးဝါရေ Ball ကို Hose Bibcock
ပြုလုပ်ထားသောနီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလီဗာသည်ကြေးဝါရေပူဘောလုံးရေပိုက် Bibcock ART.8101 ကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား: 1/2 €€, 3/4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: ၁။ Bibcock ဘောလုံးကိုအပေါက်ဖောက်ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (BSP) ချည်အထီးဝင်ပေါက် acc / ISO...
ရေပိုက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူ Bibcock, လီဗာလက်ကိုင်
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ART.8111 ကြေးဝါဘောလုံး နှင့်အတူ Bibcocks ရေပိုက် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား: 1/2 €€, 3/4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: ဆက်သွယ်မှုကိုရေပိုက်မှ 1. Bibcock ဘောလုံးအဆို့ရှင်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (BSP) ချည်အထီးဝင်ပေါက် acc / ISO 228/1 ။...
Hose Union နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks ART.8116 ဥယျာဉ်ကိုကြေးဝါဘောလုံး Bibcocks အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? To1â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: 1. Bibcock ဆက်သွယ်မှုကို hose ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. ရေ (NPT) ချည်အထီးဝင်ပေါက် ACC / GB / T က 12716 ။ 4. လူမီနီယံလက်ကိုင်အားဖွငျ့အလုပ်လုပ်။ 5....
Estopero ကြေးဝါ Bibcocks pulir
ကြေးဝါ Bibcocks အင်္ဂါရပ်များ: 1. Bibcock ဆက်သွယ်မှုကို hose ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. ရေ (NPT) ချည်အထီးဝင်ပေါက် ACC / GB / T က 12716 ။ 4. လူမီနီယံလက်ကိုင်အားဖွငျ့အလုပ်လုပ်။ 5. မဟုတ်သော ejectable ပင်စည်။ ၆၀ ဒီဂရီမှ ၂၀ ဒီဂရီအထိအပူချိန် 7. အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20)...
100 ဂရမ်ကြေးဝါ Bibcock
ကြေးဝါ Bibcock အင်္ဂါရပ်များ: 1. Bibcock ဆက်သွယ်မှုကို hose ရန်။ 2. ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေး acc / UNE-EN 12165 chrome plated ။ 3. ရေ (NPT) ချည်အထီးဝင်ပေါက် ACC / GB / T က 12716 ။ 4. လူမီနီယံလက်ကိုင်အားဖွငျ့အလုပ်လုပ်။ 5. မဟုတ်သော ejectable ပင်စည်။ ၆၀ ဒီဂရီမှ ၂၀ ဒီဂရီအထိအပူချိန် 7. အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20)...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ 3/4 လက်မအထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်ဖိအား:6bar မှ 8 bar...
နီကယ် plating ကြေးဝါ bibcocks
အရွယ်အစား: ၁ / ၂ လက်မမှ ၁ လက်မအထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar...
အနီရောင်ကြေးဝါ bibcocks ကိုင်တွယ်
အရွယ်အစား: ၁ / ၂ လက်မမှ ၁ လက်မအထိ ပစ္စည်း: နီကယ်သတ္တုကြေးနီ bibcocks အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ 3/4 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် နိုးထနေသောဖိအား -4bar မှ 10 bar...
အရွယ်အစား: 1/2 မှ 3/4 'အထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ USA၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ ရေချိုးခန်း၊ ဥယျာဉ်၊ မီးဖိုချောင် နိုးထနေသောဖိအား -4bar မှ 10 bar သို့ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110...
သတ္တုများပုံသွန်း Bibcocks ချထားတဲ့
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်အပူ: Normol အပူချိန် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:4bar မှ 8 bar
အရွယ်အစား: 3/8 လက်မမှ 1/2 လက်မမှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်အပူချိန်: ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:4bar မှ 8 bar
Chrome သွန်း bibcocks ချထားတဲ့
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း - သွပ်သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါကိုယ်ထည် အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:4bar မှ6bar...
ကြေးဝါကို cating bibcocks
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:4bar မှ6bar...
ပွတ် Chrome plating bibcocks
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: သွပ်သတ္တုစပ် အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar...
ပွတ်ခရုမ်း plating bibcocks
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: သွပ်သတ္တုစပ် အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 8 bar...
ပွတ် Chrome ကို bibcocks ချထားတဲ့
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် - မှ ၂၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ်မှသည် အလုပ်လုပ်ဖိအား: 8
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: သွပ်သတ္တုစပ် အလုပ်လုပ်အပူ:0ဒီဂရီမှ 100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ အလုပ်လုပ်ဖိအား: 8
Chrome bibcocks ချထားတဲ့
Hose Bibcock Hot Sale Bibcocks Ball ကို Hose Bibcock Brass Ball Bibcock Chrome Plated Bibcocks Chrome Plated Bibcockcs Bibcock Valve ဥယျာဉ် Hose Bibcock